Achawlaymyar, Author at Achawlaymyar - Page 176 of 187
June 6, 2020 by Achawlaymyar
ဆံပင်က ဒုတိယမျက်နှာဆိုတာ လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဆံပင်ပုံစံကကိုယ်နဲ့မလိုက်ရင် လုံးဝမလှတာလည်း အားလုံးအသိပါပဲ။ ဆံပင်အရှည်ထားချင်ပေမယ့် စိတ်မရှည်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ တစ်လအတွင်း ဆံပင်ရှည်လွယ်ပြီးတောက်ပြောင်စေမယ့်နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) မကြာခဏအဖျားတိပေးပါ ဆံပင်အဖျားလေးတွေကို မကြာခဏတိပေးတာက ဆံပင်ရဲ့မကျန်းမာတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဆံပင်ကိုကျန်းမာတောက်ပြောင်တဲ့အသွင်မျိုးဖြစ်စေပါတယ်။ (၃) သဘာဝအသီးအနှံတွေနဲ့ပေါင်းတင်ပါ ဆံပင်ရှည်လွယ်ချင်သူတွေအနေနဲ့ သဘာဝအသီးအနှံတွေနဲ့ပေါင်းတင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကို သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ ကြက်သွန်နီတစ်လုံးကို အတုံးလေးတွေဖြစ်အောင်ကြိတ်ပြီးအရည်ညှစ်ပါ။ ရလာတဲ့အရည်ကို သံလွင်ဆီအနည်းငယ်နဲ့ရောပြီး ဦးရေပြားနဲ့ဆံပင်အနှံ့ရွှဲနေအောင်လိမ်းပေးကာ နာရီဝက်လောက်ကြာရင် ခေါင်းလျှော်ပေးလိုက်ပါ။ ဒီနည်းကို တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်လုပ်ပေးရင် တစ်လကြာတဲ့အခါ ဆံပင်သိသိသာသာရှည်လာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ (၂) ခေါင်းလျှော်တိုင်းပေါင်းဆေးသုံးပေးပါ ခေါင်းလျှော်တိုင်းဆံပင်ပေါင်းဆေးသုံးပေးတာက ဆံသားခြောက်သွေ့တာ၊ ဆံပင်တွေညှိပြီးပြတ်တာတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပြီး ဆံပင်ပိုရှည်အောင် အားပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းလျှော်တိုင်းဆံပင်ပေါင်းဆေးကိုမဖြစ်မနေသုံးပေးပါ။ (၄) သဘာဝအတိုင်းအခြောက်ခံတဲ့နည်းကိုသုံးပါ ဆံပင်ရှည်လွယ်ချင်သူတွေက ဆံပင်နဲ့ဦးရေပြားကို တတ်နိုင်သလောက်အပူမထိအောင် ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ပြီးတဲ့အခါ တဘက်နဲ့ရေစင်အောင်သုတ်ပြီး သဘာဝအတိုင်းအခြောက်ခံတာက အကောင်းဆုံးပါ။ အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတွေကို သေသေချာချာလိုက်နာပြီး … Read more
အညံ့ဝင္ေနသူမ်ား ကုသိုလ္ကံကို ျမင့္တက္ေစရန္ လုပ္ေပးသင့္ေသာ ဘုရား ယၾတာ
ကောင်းတဲ့ ကုသိုလ်ကံကို မြင့်တက်စေရန် အလိုငှာနှင့် မကောင်းတဲ့ဲအကုသိုလ် ကံကို နည်းပါးပယ်ပျောက်စေရန် အလို့ငှာ ဘုရား ယတြာကို မကြာခဏလုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ယတြာတွေကတော့- ၁။ ခင်ပွန်းကြီး (၁၀) ပါးကန်တော့ခြင်း။ ၂။ ဓာတ်ကြီးလေးပါး ဆွမ်းတော်ကပ်ခြင်း။ ၃။ ရေလမ်း၊ ပန်းလမ်း၊ အလင်းလမ်းတို့ဖြင့် မဟာပဌာန်း ပူဇော်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လိုအင်ပြည့်ရာ – ဓါတ်ကြီးလေးပါးယတြာ ဓာတ်ကြီးလေးပါး ဆိုသည်မှာ- ပထဝီဓာတ်-(၂၀) ပါး အာပေါဓာတ်က-(၁၂)ပါး တေဇောဓာတ်က အပါး(၄)ပါး ဝါယောဓာတ်က အပါး (၆)ပါး တို့ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ရမည့်နေ့. မိမိ မွေးရက် နံနက်အာရုံတက်ချိန် ပြင်ဆင်ပုံ……. ခံုံတစ်လုံးပေါ်မှာ စာပွဲခင်း ဖြူဖြူသန့်သန့် ခင်းရမယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ ခုံပေါ်မှာ အောက်ပါ ပစ္စည်းတွေ ပြင်ဆင်ထားရမယ်။ … Read more
ယေန႔ညေနပိုင္း လူသုံးဦးေသဆုံးေစခဲ့သည့္ YBS (40) ယာဥ္တိုက္မႈမွ ယာဥ္ေမာင္းကို ဘားအံတြင္ ဖမ္းမိ
လူသုံးဦးေသဆုံးေစခဲ့သည့္ ယာဥ္တိုက္မႈမွ YBS ယာဥ္ေမာင္းကို ဘားအံတြင္ ယေန႔ညေနပိုင္း ဖမ္းမိ လူသုံးဦးေသဆုံးေစခဲ့တဲ့ ဆင္မလိုက္သ‌ေဘာ္က်င္းမွတ္တိုင္အနီး ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္စဥ္က ထြက္ေျပးေနတဲ့ YBS (40) ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူကို ဘားအံၿမိဳ႕မွာ ဒီကေန႔ ဇြန္ (၆) ရက္၊ ညေန ၃ နာရီက ဖမ္းမိၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔ အမွတ္ (၇) ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး ရဲမႉးမ်ိဳးေအာင္ျမင့္က One News ကို အတည္ျပဳေျပာပါတယ္။ အခင္းျဖစ္ၿပီး ေလးရက္အၾကာ သတင္းရရွိခ်က္အရ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဘားအံၿမိဳ႕၊ နာရီစင္အနီးမွာ ေစာင့္ဆိုင္းစဥ္ YBS (40) ယာဥ္ေမာင္း ေဇာ္ထက္ (ေခၚ) ေဇာ္မ်ိဳးထက္ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ရဲမႉးမ်ိဳးေအာင္ျမင့္က ဆိုပါတယ္။ ဖမ္းမိတဲ့ ယာဥ္ေမာင္း ေဇာ္မ်ိဳးထက္ကို ရန္ကုန္သို႔ ေခၚေဆာင္လာေနၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း … Read more
စစ္ကိုင္းတိုင္း တစ္ေနရာ လမ္းေပၚမွာ သပိတ္တစ္လုံးႏွင့္ ဆြမ္းခ်ိဳင့္တစ္လုံးခ်ထားတာေတြ႕တယ္။ ဘယ္သူမွလည္း မေစခိုင္း၊ ဘာအဖိုးအခမွလည္း မရဘဲ ရဟန္းတစ္ပါးက သူဆြမ္းခံႂကြခ်ိန္မွာ မိုးေရႏွင့္ လမ္းေတြၿပိဳက်ေနတာ ခရီးသြားေတြ အႏၲရာယ္ျဖစ္မွာစိုးလို့ဆိုၿပီး ေပါက္တူးတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ လမ္းျပင္ေနေလရဲ့။ ကားေပၚကဆင္းၿပီး ေလၽွာက္သင့္တာေလၽွာက္၊ လုပ္သင့္တာလုပ္ၿပီးေတာ့ “တကာႀကီး၊ ဦးဇင္းမ်က္ႏွာပုံႏွင့္ ဘြဲ႕ကိုေတာ့ မတင္ႏွင့္ေနာ္၊ သံဃာေတာ္ေတြအားလုံး ဒီလိုလုပ္တတ္ၾကပါတယ္လို့ပဲ မမွတ္သညာျပဳၾကပါေစ” တဲ့။ ေစာေစာက လမ္းမွာအမွိုက္ရွင္းေနတဲ့ ကိုယ္ေတာ္တစ္ပါးကိုလည္း ကိုယ္ႏွင့္အတူပါလာတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္က ဝတၳဳေငြဆင္းလွူတာကို “ဒကာမႀကီး လွူခ်င္ရင္ ေရွ႕ဂိတ္နားကေက်ာင္းမွာပဲ သံဃိက ရည္မွန္းၿပီးလွူခဲ့လိုက္ေတာ့” တဲ့။ ဘုရားသားေတာ္မ်ားဟာ သံသရာက လြတ္ေျမာက္တဲ့လမ္းကို ေဖာ္ထုတ္ျပသာတာသာမက ပကတိ ေလာကမွာ ပိတ္ဆို့့ေနတဲ့ လမ္းေတြကိုပါ ေျဖာင့္ျဖဴးဖို့ဝါယမစိုက္ထုတ္ေတာ္မူၾကတာပါလား ဆိုတဲ့ၾကည္ညိဳစိတ္ေလးကိုေတာ့ မၽွေဝလိုက္ပါရေစ။ Aye NeWin unicode … Read more
ဘဝဆက္တိုင္းဆက္တိုင္းမွာ ညီမေလးလိုခ်င္ေနတဲ့ သာယာတဲ့မိသားစုကိုပိုင္ဆိုင္ရပါေစလို႕😥
ဘဝဆက္တိုင္းဆက္တိုင္းမွာညီမေလးလိုခ်င္ေနတဲ့ သာယာတဲ့မိသားစုကိုပိုင္ဆိုင္ရပါေစလို့ May.30.2020စေနေန႔ ညေနပိုင္း5နာရီေလာက္ ကားတိုက္လို႔ဆုံးသြားတာပါ) 19.10.2018ေသာၾကာေန႔မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ခ်စ္သူျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္ ရန္ျဖစ္လိုက္ျပန္ခ်စ္လိုက္နဲ႔ ခ်စ္သူသက္တမ္း1ႏွစ္8လျပည့္လာခဲ့တယ္ သူကေတာ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီတဲ့မိန္းခေလးတစ္ေယာက္ပါ”ေနာက္၃ႏွစ္ေလာက္ဆို တို႔ႏွစ္ေယာက္မဂၤလာေဆာင္ပီး ပိုက္ဆံစုၾကမယ္ အိမ္ေလးလွလွေဆာက္ပီးသာယာတဲ့မိသားစုကိုပိုင္ဆိုင္ခ်င္တယ္”သူကကြၽန္ေတာ္ထက္13ရက္ႀကီးေပမဲ့ သူ႔ကို”အမ”လို႔ေခၚတာမႀကိဳက္ဘူး ”ညီမေလး”ပဲေခၚခိုင္းတယ္ 2020 2လပိုင္းမွာကြၽန္ေတာ္ဦးဇင္းဝတ္ဖို႔ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လာခဲ့တယ္ သူကျပန္ခ်င္ေပမဲ့ အိမ္မပိုင္တဲ့သူတစ္ေယာက္မို႔ ျပန္ခြင့္မရွိခဲ့ဘူး သူကေတာ့ခ်က္ျပဳတ္တဲ့အပိုင္းမွာ တကယ္ေတာ္ပါတယ္ ဖုန္းေျပာတဲ့အခ်ိန္တိုင္း”အကိုဒီေန႔ညီမစားစရာေတြလုပ္ထားတယ္ အရမ္းစားလို႔ေကာင္းတယ္ ထိုင္းကိုျပန္တက္လာပါေတာ့ အကို႔ကိုခ်က္ေကြၽးခ်င္တယ္”လို႔ ေခၚတယ္ မၾကာခင္မွာပဲ ကြၽန္ေတာ္ထိုင္းကိုျပန္တက္သြားတယ္ ဒါေပမဲ့ နယ္စပ္ကိုေရာက္ေတာ့ COVID19ေရာဂါအေျခေနေၾကာင္း ထိုင္းဘက္ကိုကူးလို႔မရဘူး ႐ြာကိုခ်က္ျခင္းျပန္လာခဲ့ရတယ္ သူအလုပ္ဝင္ရင္ပင္ပန္းလို႔ အိပ္ဖို႔ပဲစဥ္းစားတယ္ ေရခ်ိဳးဖို႔ညတိုင္းႏႈိးေပးရတယ္ ၿပီးခဲ့ရက္ပိုင္းမွာ သူစိတ္ဆိုးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ကို5ရက္ေလာက္ blockလိုက္တယ္ 27ရက္ေန႔မွာunblockျပန္ဖြင့္လိုက္တယ္ ”အကို႔ကိုblock ထားေပမဲ့ အခ်ိန္တိုင္းလြမ္းပါတယ္ အကိုနဲ႔စကားမေျပာရရင္ ဘယ္လိုျဖစ္ေနမွန္းမသိဘူး”တဲ့ 28.29ရက္ေန႔မွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္စ,ေနာက္ၿပီး စကားေကာင္းးေျပာခဲ့ၾကတယ္ 2020.May.30ရက္ေန႔ညေနပိုင္း5နာရီေလာက္မွာ သူ႔သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကေျပာျပလာတယ္သတင္းကိုၾကားလိုက္ေတာ့ကြၽန္ေတာ္အရမ္းခ်စ္ရတဲ့ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကြၽန္ေတာ္ဘဝကေနတစ္သက္လုံးထြက္သြားလိုက္ၿပီးပဲ ကြၽန္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ … Read more
June လဖြားတုိ႔ရဲ႕ အက်င့္ဆိုးေလးမ်ားနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထား အေၾကာင္း
June လဖွားလေးတွေရေ Hap p y B i r t hda y ပါနော်။ ရောဂါဆိုးကြီးကြောင့် အရင်လို မွေးနေ့တွေလည်း မလုပ်ရပေမယ့်လို့ မွေးနေ့ကစလို့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ ကံကောင်းမှုတွေနဲ့ ဆက်တိုက်ကြုံတေ့ွနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အရင်ဆုံးမပြောခင်မှာ June လဖွားလေးတွေရဲ့ ကံကောင်းစေမယ့် ပန်းလေးတွေ၊ ကျောက်လေးတွေနဲ့ အရောင်လေးတွေအကြောင်း အရင်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ပန်း- ပန်းတွေထဲ အမွှေးကြိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ နှင်းဆီပါ။ ဒါကြောင့် June ဖွားလေးတွေဟာ လှပပေမယ့် အတွင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ ဆူးတွေလိုပဲ စိတ်ဓာတ်ခိုင်ခံ့တယ်၊ သန်စွမ်းပါတယ်။ ကျောက်- ထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲ June လဖွားလေးတွေမှာ မွေးကျောက် ၂ ခုတောင်ရှိနေပါတယ်။ ပုလဲနဲ့ မြပါ။ အရောင်- … Read more
ဒီနေ့မှာပဲ နှစ်ဖက်မိဘတွေရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားသူကြီးရှေ့မှောက်မှာ မင်္ဂလာမော်ကွန်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီဖြစ်တဲ့ အိမ့်ချစ်တို့ ချစ်သူစုံတွဲ
ပရိသတ်တွေလေးစားအားကျနေရတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲလေးတစ်တွဲဖြစ်တဲ့ အိမ့်ချစ်တို့ချစ်သူစုံတွဲလေးကတော့ ဒီနေ့မှာပဲ နှစ်ဖက်မိဘတွေရဲ့ သဘောတူညီချက်နဲ့ ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားသူကြီးရှေ့မှောက်မှာ မင်္ဂလာမော်ကွန်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ အိမ့်ချစ်က “မေတ္တာတရားတွေလွှမ်းခြုံပြီး ဒီနေ့ ၆.၆.၂၀၂၀ မှာ အိမ့်ချစ်တို့ ချစ်သူနှစ်ဦးနှစ်ဖက်မိဘများနဲ့ ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားသူကြီး ရှေ့မှောက်မှာ မင်္ဂလာမော်ကွန်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါပြီ ဘဝကိုခက်ခက်ခဲခဲပင်ပင်ပန်းပန်းဖြတ်သန်းလာပြီး လှမ်းကြည့်လိုက်တိုင်းမှာအမေပဲရှိခဲ့တာ မပြည့်စုံတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့နေ့ရက်တွေက ခါးသီးလွန်းခဲ့တယ် ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေဖြတ်ကျော်ရတိုင်းပင်ပန်းတဲ့ အချိန်တွေရင်ဆိုင်ရတိုင်းမှာ မှီစရာပခုံးလေးတစ်ခု နားခိုစရာရင်ခွင်လေးတစ်ခု လိုချင်ခဲ့တာ… ဒီနေ့မှာတော့ လိုချင်ခဲ့တဲ့ပခုံးလေးတစ်ခု ကမ်းလင့်တဲ့လက်လေးတစ်စုံကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ပြီ မေလတုန်းကစေ့စပ်ပွဲလေးကိုတော့ဖျက်လိုက်ရပေမယ့် ရည်ရွယ်ထားစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဒီနေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါပြီ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲကတော့ ကပ်ရောဂါကြီးပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်အားလုံးအေးချမ်းသွားတဲ့အချိန်မှပဲ ကျင်းပပါမယ်ရှင့် အိမ့်ချစ်ကိုချစ်သလို အိမ့်ချစ်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကိုလဲ ချစ်ပေးကြပါလို့ “ဆိုပြီး သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်…။ Source:Eint Chit Zawgyi ဒီေန႔မွာပဲ ႏွစ္ဖက္မိဘေတြရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တရားသူႀကီးေရွ႕ေမွာက္မွာ မဂၤလာေမာ္ကြန္းတင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီျဖစ္တဲ့ အိမ့္ခ်စ္တို႔ ခ်စ္သူစုံတြဲ ပရိသတ္ေတြေလးစားအားက်ေနရတဲ့ ခ်စ္သူစုံတြဲေလးတစ္တြဲျဖစ္တဲ့ … Read more